Seeder Factory, Suppliers - China Seeder Manufacturers
Chibage Soybean Tractor Precision Seed Planter Seeder Chibage Machine 4 Row Cheap Price
Chiyero chembeu yembeu yakagadzikana, chiyero chembeu chemutsara wega wega chinowirirana, mbeu dzakagoverwa zvakaenzana muforo yembeu, ukobvu hwevhu rakavhara pambeu zvakangofanana, kutsemuka kwembeu kwakadzikira, chiyero chakakodzera chehuwandu hwemakomba chakakwira, uye mwero wakakodzera wekuparadzaniswa kwezviyo wakakwira.Nemamiriro evhu akanaka, kushanda pasina-tillage kunogona kuitwa.
2BXJ nhevedzano yembeu yegorosi inotora mhodzi yemhando yembeu uye fetireza yekuburitsa michina uye matatu-mapoinzi ekurembera mudziyo, unogona kupedzisa mabasa ese ekudyara senge kuenzanisa, kuchera, kudyara, kuisa fetereza, kuvhara ivhu uye kudzvinyirira panguva imwe chete.
1. Muchina unotora mhodzi yemhando yegumbo rekunze uye gadziriro yefetereza, ine huwandu chaihwo hwekudyara, kuita kwakagadzikana uye kuchengetedza mhodzi.
2. Muchina unotora mhando yepamusoro square chubhu kuti uve nechokwadi chekuti nguva yekudyara basa haina kuremara.Iyo nzira yekufambisa yakabatana neyekutapurirana shaft, iyo yakachengeteka uye yakavimbika.
3. Adopt yakafara ditch opener, kupamhidzira kuwedzera kunobatsira kuwedzera kugadzirwa.
4, Kugadziriswa kwehuwandu hweMbeu kunotora vhiri reruoko uye giya bhokisi chimiro, kugadzirisa kwakaringana uye kuri nyore.
5. Rutivi rwebhokisi refetiraiza rinotora denderedzwa arc pamusoro, uye pasi pasi rinotora nzvimbo yakaita V.Mbeu yembeu inoiswa padivi kuisa mbeu, iyo inovandudza kushanda kwekushanda.